YALIS Team - Zhongshan City YALIS Akụrụngwa Ngwaahịa Co., Ltd.
1. Market kọntaktị: YALIS R&D otu bụ nnyocha ngalaba raara nye ọdịdị mmepe, Ọdịdị ọhụrụ, technology nnyocha na ndị ọzọ na ngwaahịa ngwọta. E nwere ụdị ejiji ọhụrụ nke 8-10 ọhaneze na-eme kwa afọ.
2. Mepụta ihe ị chọrọ n'ime usoro niile: site na imepụta drafts na mbipụta 3D, ịkpụzi, anyị na-ejide n'aka na usoro ọ bụla na-emepụta n'ụdị na nchebara echiche.
N'oge na-amị na mgbe-ahịa, anyị na-elekọta nke ọ bụla usoro iji nye ndị ahịa anyị na-elu-ọgwụgwụ ngwaahịa na ọrụ.
Otu ngalaba ahia siri ike na-akwalite azụmahịa nke ụlọ ọrụ ma na-ere ahịa maka ngwaahịa, ọrụ, yana ijide ngwa ahịa na ahịa ya. YALIS nwere nke ya. Ha bụ ịnụ ọkụ n'obi na-eto eto, na-esochi ahịa site n'oge ruo n'oge. Dabere na mkpa nke ahịa ahụ, ha na-enye atụmatụ dị na ngalaba nkwalite, ahịa & nrụpụta. Ha na-enyekwara ndi n’enwe ahia na ndi ahia aka n’otu esi arụ ọrụ ha nke ọma.
Ngalaba Na-emekọ Ihe Ọnụ
Ngalaba imekọ ihe ọnụ nke mba na-elekwasị anya na imekọ ihe ọnụ na ndị egwuregwu kachasị elu, gụnyere ndị na - ekesasị ya, ndị nrụpụta ụzọ na ndị ọrụ ngo na mpaghara na mpaghara ọ bụla. Ha na-enye ndụmọdụ nke azụmahịa, ma ha bụ otu ndị a tụkwasịrị obi nke kwesịrị ịba uru maka ọdịnihu nke azụmaahịa gị.
Ngalaba Na-achịkwa Ogo
Usoro ọ bụla QC Department siri ike na-achịkwa usoro ọ bụla, YALIS na-enyocha ma na-enyocha ogo nke oge usoro mmepụta na usoro nhọrọ ndị na-eweta ngwaahịa. Usoro ọ bụla anyị anaghị ekwe ka ere ngwaahịa dị njọ n'ahịa. A na-enyocha ihe ndozi na akụrụngwa niile n'otu n'otu, iji hụ na enweghị njikwa ọ bụla mgbe ị na-emeghe ma ọ bụ mechie ụzọ.